हामी नेपाली र हाम्रो बोहुभाषा - Ddus Gajurel Blogs
हामी नेपाली र हाम्रो बोहुभाषा
on Tuesday, September 01, 2009 in ब्यङ्ग्य
हामी नेपाली , बहुभासी, स्वतन्त्र, अरू के के हो के के । भनेर साध्ये नै छैन । हामी नेपाली पैरखमा धनी । अन्य कुनै देशका मानीसले लाएको काम जस्तोसुकै भए पनि गर्ने तर देशका लागि कुरा मात्रै गर्ने , काम गर्नु परेमा अर्को तिर मुन्टो फैलाउने हामी बिर नेपाली । इराक मा 12 जाना नेपाली लाइ मार्दा, रितिक रोसन ले केही कुरा नेपालको बारेमा बोल्दा नेपाल हल्लाउने हामी नेपाली । 19 दिने आन्दोलन मा पुरा देशबाट नै उठी देशमा गणतन्त्र ल्याउने पनि हामी नेपाली नै । एक पटक म सलाम गर्न चाहन्छु यि सम्पुण नेपाली लाइ । कती धेरै बाहादुर हामी नेपाली। कती मेहेनती हामी नेपाली । कती प्रगती भइ सक्यो हामीले गर्दा हाम्रो नेपालमा । सुन्दर शान्त नेपाल अशान्ती , हत्या हिम्सा, अपहरण मा परीणत गरी भयो हामी नेपाली ले गर्दा । अझ भुल्नै नहुने कुरा श्री ५ बडामाहाराज धिराज बिरेन्द्र बिर बिक्रम शहादेब को बंश बिनासमा रूने पनि शामी नेपाली र श्री ५ बडामाहाराज धिराज ज्ञानेन्द्र बिर बिक्रम शहादेब ले दरबार छोडेर जादा खुसी हुने पनि हामी नेपाली । नेपालमा 5/10 हजारको काम लाइ वास्ता नगर्ने र बिदेशमा5सय को काम लाइ दिनहु धाउने । नेपालमा रहुनजेल बिदेश को भिजा को लागि कुदने र बिदेश पुगी सके पछी नेपाली भन्न मन नपराउने हामि बिर नेपाली । नेपालमा उत्पादन गरेको सामना नखरीदने तर बिदेशी सामान भनेपछी जस्तोसुकै मुल्य तिर्न पनी पछी नपर्ने हामी नेपाली । जय नेपाल , जय नेपाली । फेरी पनि एक पटक सलाम गर्न चाहन्छु सम्पुण नेपालीलाइ
जय नेपाल , जय नेपाल , जय नेपाल , जय नेपाल , जय नेपाल , जय नेपाल
हत्तेरीका म पनि कस्तो मान्छे , अहीले भइ रहेको कुराहरू त झन्नै भुलेको । अहीले नेपाल मा कहि नभएको जात्रा रत्नपार्कमा/ सिंहदर्बारमा हुन्छ रे । हर दिन हुने बन्द , अपहरण, हिम्सा मा चुपचाप बस्ने हामि नेपाली । देशभक्ती के हो ??? भन्ने कुरा भुली देशका लागि यस्तो उस्तो भनी हिड्ने हामी नेपाली । बिदेशमा देश टुक्रएको दखेर देश टुक्र्याउने कुरा गर्दा समर्था गर्ने तर त्यही देशको भाषा प्रयोग गर्दा बिरोध गर्ने हामी नेपली । यस्तै कुराहरू छन अहीले नेपाल मा । कुनै साथि (बिदेशी ब्यक्ती ) ले नेपाल धुम्न जाने कुरा गर्यो भने एक दुइ महिना रोक है, भन्नु पर्छ र कतिलाइ भनेको पनी छु । उनिहरू को पनि जिबनको बारेमा सोच्नु गर्छ एक पटक । हामी आफैले गर्दा हामेो नेपाल बिग्रीयो । तर कोही पनि मान्न तयार छै । सबै जाना अरूलाइ मात्र दोस लाउन खोज्छन । तर यो तितो सत्य कसैलाइ पनि मन्जुर छैन । धिक्कार छ हामी सम्पुण नेपाली मा । देशमा शान्ती ल्याउनु को सट्टा झन देशमा हत्या हिम्सा गर्ने लाइ साथ दिनु । खै के भन्नु मलाइ त रून पो मन लागेर आयो ……………………
अब कुरा गरैा भाषा को …….
भाषा भनेको एक अर्काले आफ्नु भाबना ब्यक्त गर्ने माध्यम । तर यसको बिपरीत अहिले नेपालमा भाषा को कारण देशमा अझ अशान्ती भर् राखेको छ । भन्नु पर्दा हामी ले आफैको अबुझ को कारण देश बिग्री राखेको छ । हामी आफैले लइाएको नया नेपाल यस्तो पो रहीछ, बल्ल बुझ्न थालीयो । यस्तो थाहाँ भएको भए त नयाँ नेपालको कुरै गरीदैन थिउो न ?????
अझ उपराष्ट्रपति ले हिन्दीमा कुरा गरे पछी त झन कुरै नगरूम हामी नेपाली को कन्सीरूी तातेर खपिनसक्नु भयो । सबैलाइ गल्ती लागे पनि मेरो बिचारमा उसले सही भाषा प्रयोग गरेको हो ( यसको मतलब मलाइ हिन्दी मन पर्न, फोरम आदी इत्यादी भन्नु होला तर मलाइ त संसारका कुनै पनि भाषा मन पर्दैन , मलाइ त सम्पुण बिश्व एक जस्तो लाग्छ । कुनै पनि धर्म मन पर्दैन । कुनैपनि सस्कृती मन पर्दैन । ) मलाइ एउटैमात्र सस्कुति भाषा, धर्म मन पर्छ त्यो हो शान्ती । हामी आफैमा लडेर देशमा शान्नती ल्याउन सकिदैन कहिलेपनी । र अर्को पनि कुरा अहिले कमुनिकेन को वेब साइट हरूमध्ये फेसबुक सबैभन्दा अगाडी छ । यसैमा धेरै प्रकारका मित्रहरू भेटीन्छन । केही मित्र हरू सोच बिचार गरेर बोल्नु हुन्छ केही मित्र हरू मनमा जे आयो त्यही बोल्नु हुन्छ । मेरो फेसबुक प्रोफाइल मा बिश्वभरी का भेरै मित्रहरू छन । नेपाल , भारत, मेन्मार्क , अमेरीका, इङगेन्ड , इजिप्ट, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया , आदी इत्यादी …… सबैले बुझ्ने भाषा अङ्गेजी हो तर मलाइ जुन मन लाग्यो त्यही देशको भाषा प्रयोग गर्न पाउने अधीकार फेसबुकले दिएको ले कहिलेकाही हिन्दी भाषामा केही गितहरू तथा केही कबिताहरू लेख्ने गर्थे । त्यसमध्ये केही साथिहरूले पहीले देखी नै हिन्दीमा लेख्यो भनेर बिरोध गैदै हुनुहुन्थो । तर पनि मनमा नराखि याद गरेको थिइन । तर सोच्दै , अध्यान गर्दै गए जादा साथिहरू गलत हुनुदो रहीछ मेरो बिचारमा ( म पनि नेपाली न हुँ, आफुलाइ राम्रो देखाउनु त परि हाल्छ नि ? ) । मेरो गणित ले यो पत्ता लगायो कि हामी नेपाली चाहिने कुरामा चासो देखाउदैनम, कसैले राम्रो कुरा गर्न आट्यो भने खुट्टा तान्ने, र नचाहिदो कुरा लाइ धेरै प्राथमिकता दिने…….. आदि इत्यादी , । अनि मैले यो पनि सोचे कि हाम्रा नेपालिको घरमा दिनहु प्रयोग हुने नुन, भारत बाटै आउछ । हैन हिन्दी भाषा बोल्नै नहुने, हिन्दी गित सुन्नै नहुने भन्ने चाही वाईयात कुरा हो, फेरी भाषाको मात्रै कुरा पनि भ‍एन , ईण्डीयाको भाषा बहिस्कार गर्ने हो भने ईण्डियाबाट आउने नुन खाने कि नखाने ??? बन्ने कपडा लाउने कि नलाउने ??? हामीले नुन देखि तेलसम्म सारी देखि गाडी सम्म सबै इन्डिया को नै चलाउने तर भासा चही चलाउदा हामिलाइ असर पर्ने ??? यो काहाँ को न्याय हो ??? हो अफीसियल भाषा हाम्रै नेपाली हुनुपर्छ तर यो बोल्नै नहुने सुन्नै नहुने भन्नेले यताबाट गएको नुन तेल पनि खानु भएन ,लुगा लाउनु भएन , गाडी चढनु भएन , ………..
यस्तै कुरा गर्दै जाने हो भने त नेपाल रितिने रहीछ । स्विजरलेन्ड भनेर सु गर्ने ठाउँ पो बानउन लागेछन । ल ल ल त्यसरी मेरो देश लाइ बिगार्न पाहिन्छ ??? पहिले साना हुदा कक्षामा सरले पढाउदा हटि हैन डटी लड्ने नेपालिको बानी हुन्छ । तर अहिले त यस्तो लाग्छ कि डटी हैन ………….गर्ने नेपालिको बानी हुन्छ । हत यस्तो भए र पनि हामि हेरी राखेका छै । हामी संग केही छैन दिने देशलाइ यसै कारण होला हामिले यस्तो गरेको । केही छैन भने केही पनि नदिउ , नत्र दिन खोज्दा हानी हुन्छ । हाम्रो देशलाइ धेरैले धेरै कुरा दिन खोजे तर काम लाग्ने कुरा कसैले पनि दिएनन् । खै के लेख्ने हो मलाइ त आएन केही पनि , आज लाइ यती नै भोली अरू लेख्नु पर्ला …………………….
जय नेपाल, हिन्दु भगवान लाइ “भगवान देशमा शान्ती ल्याइदेउ,” क्रिस्चियन लाइ “God Give A Peace In My Contry”, अल्लाह लाइ “हे खुदा देशमा शान्ती ल्याइदेउ”,
सम्पुण नेपाली मिली नेपालको रक्षा गरून, जय नेपाल